विपन्नको सहारा बन्यो अञ्चल अस्पतालको पोषण पुनःस्थापना गृह | Nepali Health
विपन्नको सहारा बन्यो अञ्चल अस्पतालको पोषण पुनःस्थापना गृह
२०७४ वैशाख ३ गते १०:१२ मा प्रकाशित
रुपन्देही, ३ वैशाख । लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल, बुटवलमा सञ्चालनमा रहेको पोषण पुनःस्थापना गृह विपन्नको सहारा बनेको छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभाग बाल स्वास्थ्य महाशाखा र नेपाल युथ फाउन्डेसनको संयुक्त लगानीमा लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल परिसरमा सञ्चालित गृहमा लुम्बिनी अञ्चलका विभिन्न जिल्लाबाट आएका पोष्ट्रिक आहार कम भएका बालबालिकाका लागि राम्रो साहार बनेको छ ।
तीन वर्षअघि स्थापना भएको पोषण पुनःस्थापना गृहमा पोषण कम भएका बच्चा तथा आमाहरुलाई पोषणगृहमा राखेर पोषकयुक्त खाना खुवाउने गरिन्छ । पोषण कम भएका बच्चाको तौल कम हुने र अन्य विकास पनि कम हुने भएकाले चिकित्सकले पोषण पुनःस्थापना गृहमा पठाउने गर्छन् ।
निम्न आर्थिकस्तर र कुपोषण भएका १४ वर्षमुनिका बालबालिकालाई पोषण केन्द्रमा भर्ना लिइन्छ । केन्द्रकी प्रमुख सुजता बोझाका अनुसार यहाँ बालबालिका ल्याउने आमालाई पोषणको विषयमा जानकारीसमेत गराउने गरिएको छ ।
पुनःस्थापना केन्द्रमा अहिले सातजना बालबालिकाले पोषकयुक्त खाना खाइरहेका छन् । बच्चासँगै आमालाई पनि गृहमा नै राखेर खाने बस्ने व्यवस्था गरिएको छ । दशजना बच्चा तथा आमालाई राख्न सक्ने क्षमता गृहको रहेको छ ।
तीन वर्षको अवधिमा २५१ जना बालबालिकाले पोषण पूरा गरी घर फर्किएका बोझाको भनाइ छ । सामान्यतया १५ दिनमात्रै राख्ने नियम छ । तर अत्यन्त कमजोर शारीरिक अवस्था भएकाहरु तीन÷चार महिनासम्म पनि बसेका छन् ।
छ महिनामुनिका बच्चालाई भर्ना नगर्ने भए पनि विपन्नताका कारण सुत्केरी महिला पनि पोषण केन्द्रमा बसेका छन् । घरमा आहार खुवाउन सक्ने आर्थिक अवस्था भएकाहरुलाई तालिम दिएर पठाउने गरिए पनि विपन्नलाई त्यही राख्ने गरिएको हो ।
कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका–१ का अभिनाश थारु २० महिना भए पनि तौल जम्मा पाँच किलोमात्र भएपछि अहिले गृहमा आएका छन् । सामान्यतः उनको तौल ११ किलोभन्दा माथि हुनुपर्ने थियो । अहिले पोषण कम भएका कारण वृद्धि नभएको परिवारले थाहापाएपछि पोषणगृहमा राखिएको हो ।
अर्घाखाँची चिदिका गाविसकी राधा कुमाल दुई महिनाअघि घरमै सुत्केरी भइन् । खेतीकिसानी गरेरमात्रै छाक टर्ने भएकाले गर्भवती हुँदा प्रशस्त पौष्टिक आहार पाइनन् । जसको कारण जन्मिएको तेस्रो सन्तान निकै कम तौलको र कमजोर भयो । जन्मिएको दुई महिनामा छोरीको तौल जम्मा साढे एक किलोमात्र भएपछि स्थानीय स्वास्थ चौकीको सल्लाहमा आर्धाखाँचीबाट लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालको पोषणगृहमा आएर बसेकी छन् । छोरीको तौल विस्तारै वृद्धि भइरहेको छ ।
प्रमुख बोझाका अनुसार पोषण कम भएर आउनेहरु पहाडी जिल्लाका विकट गाउँ तथा तराईका बालबालिका नै धेरै छन् ।
गैरसरकारी संस्थाले सुरुवात गरे पनि अहिले पोषण महाशाखामार्फत गृह सञ्चालन भइरहेको छ । विसं २०७५ पछि लुम्बिनी अञ्चल अस्पताललाई नै हस्तान्तरण गरिने कार्यक्रम छ । रासस
‘अस्पतालमा अक्सिजन अभाव भयो, घरमा राखिएका सिलिन्डर फिर्ता गरौँ’
७२ वटा अस्पतालले लगे साढे १८ हजार भाइल रेम्डेसिभिर, कसले कति लगे ? (सूची सहित )
काठमाडौँमा भेरोसेल खोपको दोस्रो डोज लगाइँदै, तपाइँको पालो कहिले ? (तालिका सहित)
१०० बेड माथिका निजी तथा सामुदायिक अस्पतालहरुले १५ दिन भित्र अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्नुपर्ने
बुधबार देशभर थपिए ९३०५ जना कोरोना संक्रमित, ४४४४ जना संक्रमणमुक्त
युनिभर्सल मेडिकल कलेजले भन्यो, ‘४ बजेपछि अक्सिजनसहितको उपचार दिन सक्दैनौँ’
तपाईँको आँखामा कचेरा लाग्छ ? कारण यस्तो छ